Daandiin Qilleensa Ityoophiyaa Kaampanii softiweeriifi teeknooloojii dhiyeessuu “Saabree” jedhamu waliin waliigalte hojii haaromse – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Daandiin Qilleensa Ityoophiyaa Kaampanii softiweeriifi teeknooloojii dhiyeessuu “Saabree” jedhamu waliin waliigalte hojii haaromse
On Oct 12, 2021 235
Finfinnee, Onkololeessa 2, 2014 (FBC)-Daandiin Qilleensa Ityoophiyaa Kaampanii softiweeriifi teeknooloojii dhiyeessuu “Saabree” jedhamu waliin waggoottan 7 dhufaniif waliin hojjechuf waliigaltee Doolaaraa miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 10 haaromse.
Waliigaltee kanaanis Daandiin qilleensa Ityoophiyaa sirna tajaajila teeknooloojii imaltootaa Saabree “ Saabree Soonik” jedhamu fayyadamu itti fufa jedhame.
Kunis daandiin qilleensa sirna bittaafi gurgurtaa ammayyeessu, hanga galii dabaluu fi imaltootaaf haala mijaataa akka uumuuf himameera.
Itti aanaan preezdantii Korporeshinii Saabiree Diinoo Geelmaati Daandiin qilleensichaa dhiibbaa tatamsa’ina Covid -19 keessaa osoo jiruu indaastirii Aviyeeshiniin milkaa’ina galmeessuu itti fufeera jedhan.
Waliigaltichi Daandiin qilleensa bu’uura fedhii gabaa fi dorgommii gabaa irratti yaada gorsaa gatii fi tajaajila dhiyeessuun dorgomaa fi fayyadamummaa isaa guddisa jedhame.
Hojii gaggeessaa Olaanaan Daandii qilleensichaa obbo Tawaldee G/Maariyam teeknooloojii cimaa fi ammayyaan jiraachuun isaa milkaa’ina Daandii Qilleensaaf gumaacha olaanaa ni qabaataa jechuusaanii EeR 101 gabaaseera.
Chaayinaatti doonii nama maleessaa 5G yaalii qilleensarra bolooli’uu taasise
Bara kana barattoota miiliyoona 1’f waraqaan eenyummaa dijiitaalaa ni laatama
Chaayinaatti lakkoofsi fayyadamtoota Intarneetii 5G miiliyoona 450 ga’e
Chaayinaatti doonii nama maleessaa 5G yaalii qilleensarra…
Ityoophiyaa ga’uumsa teeknooloojii Afrikaa taasisuuf…
Bara kana barattoota miiliyoona 1’f waraqaan eenyummaa…